खेल कुनै नहुने भएपछि, के का लागि महेन्द्र रंगशालामा २४ कराेड खर्च ? - Tulsipur Online
खेल कुनै नहुने भएपछि, के का लागि महेन्द्र रंगशालामा २४ कराेड खर्च ?
Posted by Admin | ८ बैशाख २०७६, आईतवार १५:०९ |
८-बैशाख / बर्षोपछि नेपालगञ्ज रंगशालाले नयाँ स्वरुप पायो । आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बाहानामा महेन्द्र रंगशालाको मैदान हरियो देखिन्छ भने छेउमा प्याराफिटले आकर्षक देखिन्छ ।
नेपालगञ्ज जाने जो कोही यो मैदानमा पुगेर आफ्नो सोसियल साइटमा फोटो अपलोड गरेकै हुन्छ । चीनबाट झिकाइएको फिट गर्न मिल्ने प्याराफिट र बंगलादेशबाट ल्याइएको दुबोले महेन्द्र रंगशालाले अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनसक्ने छनक दिएको छ ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन भएको यो रंगशालामा खेल्नका लागि भने कुनै मौका छैन । मुख्यगरि फुटबल खेल आयोजना हुने अनुमान गरिएपछि हेर्दा जति हरीयो र आकर्षक देखिन्छ, मैदानमा पुग्दा यसको लेभल र ग्रास राम्रोसँग उम्रिएको छैन । जसका कारण यो मैदानमा कुनैपनि खेल हुन सकेन ।
मुख्य गरि फुटबललाई यो मैदानमा आयोजना गर्नुपर्ने हो, तर मैदान तयार नभएको भन्दै सामान्य मैदानमा प्रतियोगिता भइरहेको छ ।
मैदान निर्माणका लागि मात्र नौ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् महेन्द्र रंगशालाको स्वरुप फेर्नका लागि २४ करोड खन्यायो । तर जति रकम खन्यायो, त्यो अनुसार मैदान समयमा तयार हुन सकेन । जसका कारण यो उद्घाटन र समापनमा मात्र सिमित हुने होइन भन्ने डर सुरु भएको छ ।
रंगशाला पूर्णरुपमा तयार नभएकाले खेलाडी नेपालगन्जदेखि ८ किलोमिटर पश्चिम खजुराको डी गाउँस्थित सामान्य चौरमा त्यो पनि पुरा लेभल नमिलेको राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरु खेलिरहेका छन । जसका कारणपनि खेलाडीहरु राम्रो मैदानमा खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आश लगाइरहेका छन । हाल फुटबल भइरहेको डी गाउँको मैदानमा कतै खाडल त कतै घाँस छ । मैदान राष्ट्रियस्तरको फुटबल खेलाउन योग्य नभएपनि अन्य विकल्प नहुँदा त्यसैमा प्रतियोगिता सक्नका लागि खेलाइएको छ ।
प्रतियोगिता खेलिरहेका खेलाडी भन्छन, महेन्द्र रंगशालामा खेल होला भन्ने आशा गरेका थियौ, तर अन्तिममा यो चौरमा खेल्नु परेको छ, खेलाडीमा जुन उत्साह थियो, त्यो सबै हराएको छ । सामान्य चौरमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नु हामीहरुलाई निकै खिन्न लागेको छ ।
दुबै मैदानको तुलना गर्दापनि आकाश जमिनको फरक रहेको छ । यस्तोमा खेलाडी कतै घाइते भएमा के गर्ने त्यसको जिम्मा कसले लिने, मैदानको लेवल नमिल्दा खेलाडी घाइते हुने निकै संभावना हुन्छ, त्यसमा पनि आयोजकले ध्यान दिनुपर्ने हो, न की सुरु गरियो अब यस्तै गरि सकिन्छ भनेर बस्नु ।
आठौंलाई नै भनेर २४ करोड लगानी गरेको मैदानमा खेलाडीले खेल्न नपाए त्यसको औचित्क के, आखिर यत्रो रकम खर्च गरेर के काम, देखाउनका लागि मात्र मैदान बनाएको हो भने किन यत्रो खर्च गरियो, की यो मैदान तयार नभएपछि सोहि अनुसारको अर्को राम्रो मैदान खोज्नुपर्ने हो । तर त्यो पनि हुन सकेन । अब केहि दिनमा खेल सकिहाल्छ, त्यसपछि जे होगा देखा जायगा भन्ने प्रवृती यतिबेला आयोजकमा देखिएको छ ।
Previousनेकपाको पोलिटब्युरो र जिल्ला कमिटी घोषणा हुँदै
Nextथुनुवाले बचाइन् सुत्केरीको ज्यान